White feces na nwa
Ụmụ nwanyị ndị ghọworo nne na-adịbeghị anya, na-aṅa ntị na mgbanwe ọ bụla banyere ahụ ike nke nwa ha. Ha na-eso ọ bụghị nanị ọnọdụ zuru oke nke nwatakịrị ahụ, kamakwa na-aṅa ntị na nkọwa ọ bụla nwere ike ịkọwa na ihe na-ezute na ahụ nwa. Nke a na-emetụta oche nwa ahụ. Mama, na-agbanwe onye ntanetị, jiri nlezianya tụlee ma nyochaa ihe dị n'ime ya, ya bụ. agba, isi na stool agbanwe. Ntị dị otú ahụ na-enyere aka n'ịmata àgwà ahụ, nke ọ dị mkpa iji mee ihe iji chọpụta ihe kpatara nhụsianya site n'ahụ nwatakịrị ahụ ike ma wepụ ha.
N'ime ụmụaka na-erubeghị afọ, ọ na-esiri ike ịchọta ụkpụrụ na-emetụta ha. Ụdị, isi na ntanye nke obere nwatakịrị na-adabere n'ụdị dị iche iche: dịka ọmụmaatụ, ma nwata ahụ natara ọgwụ ọ bụla na nso nso gara aga, ma nne ya na-enye nwa ara ma ọ bụ na-enye nri, nakwa maka afọ nwata. Ụcha ọcha nke stool ahụ bụ ihe na-adịghị edozi anya ọ bụghị iwu, ma ọ bụghị mgbe nile na-egosi ọbịbịa nke ọrịa siri ike.
Ọ bụrụ na nwatakịrị na-enweta nri na-enweghị isi, mgbe ahụ, ọkpụkpụ obi ya nwere ike ịghọ ìhè ma ọ bụ na-acha ọcha n'okpuru nduzi nke ụfọdụ ụdị nri ụmụaka. N'ime oge agbawa mmiri ara ehi, ọ bụrụ na nwa ahụ amalite inweta nri ndị ọzọ, mgbe ahụ, ọchịchọ ya nwekwara ike ịgbanwu ọcha. N'ime ụmụaka ndị na-enweta ọtụtụ ihe site na nri ndị okenye, ndị feces nwere ike gbanwee na-acha ọcha n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke calcium nke na-abanye n'ime ahụ na ngwaahịa ndị na-eri ara ehi. Ọ bụrụ na ahụ nwatakịrị ahụ enweghị ike ịhazi nnukwu mmanụ aṅụ nke na-abịa na nri, mgbe ahụ, ọchịchọ ya nwekwara ike ịghọ ìhè.
Otú ọ dị, eriri ọcha dị ọcha anaghị abụ ihe nzaghachi nye ihe oriri enyere. Mgbe ụfọdụ, agba ọcha nke feces bụ otu n'ime ihe mgbaàmà nke na-egosi ọrịa ma ọ̄ bụ ihe na-agbanwe site na arụ ọrụ nkịtị nke usoro nsị. Ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta ma ọ bụrụ na nwatakịrị ejiri nlezianya na-ahụ ihe dị iche iche.
Ọ na-abụkarị na e chere na ị ga-enwe mmerụ ọcha n'ime nwatakịrị bụ ọrịa ịba ọcha n'anya. Ma ọtụtụ ndị na-eche na ịba ọcha n'anya ga-abụrịrị na mgbakwunye na-acha ọcha ọcha, yellowing nke akpụkpọ na anya na nwa. Ma jaundice anaghị ejikọta na akpụkpọ anụ na anya anya, yellowing nwere ike ịpụta mgbe e mesịrị, ọbụlagodi mgbe oge ọcha bụ nanị ihe mgbaàmà nke ịba ọcha n'anya. Ma ị gaghị enwe ike ịgba ọsọ, ma ọ dị mkpa igosi nwatakịrị ahụ ọkachamara, iji kwenye ma ọ bụ kọghachite nchọpụta ahụ e mere na enyemaka nke nchọpụta dị mkpa na nchịkọta nyocha.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere arụ ọrụ dị mma nke gallbladder, esemokwu ọcha nwekwara ike ịpụta. Ime ihe ike gụnyere mmechi kpamkpam ma ọ bụ nke ọ bụla nke biliary tract. Ozokwa, ọ bụrụ na bile adịghị ahapụ ụyọkọ ahụ, ọ ga-adị ọcha karịa ka ọ dị. bile stains stool. A na-akpọ oche a dịka "alcholoid", nke pụtara. enweghi bile.
Ọzọkwa, ụfọdụ ọgwụ na ịṅụ mmanya pụrụ imetụta ụcha nke feces. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-acha ọcha, na-egbu mgbu ma na-acha ọbara ọbara, mgbe ahụ, nke a na - egosi ọnụnọ nke dysbacteriosis. Ụdị nke feces nwere ike gbanwee ma ọ bụrụ na ọrịa rotavirus dị n'ime ahụ nwatakịrị ahụ, mana ahụ ọkụ, afọ ọsịsa na vomiting na-arịwanye elu, ihe mgbaàmà na-acha ọbara ọbara yiri ka ọ bụ - ọbara ọbara na akpịrị akpịrị, imi imi. Ndị na-echekwa ihe dị otú ahụ na-achọta ọ bụghị nanị dị ọcha, kama ọ bụkwa onyinyo chaa chaa, na ihe owuwu dị ka ụrọ mmiri.
Ọhụụ dị mfe nke ụmụaka nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu dị iche iche na nke a anaghị abụkarị ọrịa dị ize ndụ. Dịka ọmụmaatụ, feces nwere ike ịnweta eriri ọcha, ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ amalitela ezé. N'okwu a, enwere ọcha nwere ike ịlaghachi ozugbo. Ma, ịkwacha ọcha na-acha ọcha nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ọrịa siri ike. Ọ dị mkpa ịchọ enyemaka site na dọkịta ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere ebe nchekwa ọcha karịa otu ugboro, na n'otu oge ahụ, hụ ihe osise nke ọnọdụ nwatakịrị ahụ dum.
Mmiri nke ụmụaka
Atụmatụ maka ndị nne na nna: ahụike nke nwatakịrị ahụ dị n'aka gị
Mgba aghara na nwa nọọsụ, esi enyere aka?
Kedu ka m ga-esi saa obere nwa ọhụrụ maka oge mbụ?
Otu esi enyere nwata aka igwu mmiri n'ime afọ ise
Kedu otu esi eji akwa akwa nwata n'oge oyi?
Mpempe akwụkwọ mkpofu
Esi enye onyinye nye nwatakiri maka afọ ọhụrụ
Nkụzi nke ịhụnanya maka okike na ụmụ akwụkwọ ọta akara
Ezi ntụziaka maka nri nri
Ihe omume iji zụta ihe mara mma
Ime na anu ulo
Kedu ụdị ọgwụ mgbochi a chọrọ maka nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Nsogbu ụmụaka na ụzọ isi dozie ha
Kedu ihe egbu egbu nke nku anya
Ihe bara uru ma na-emerụ ahụ maka ahu
Ihe kachasị ụtọ ma dị mfe ntụziaka nke efere
Myostimulator bụ ngwaọrụ pụrụ iche maka ọgwụgwọ, ịhịa aka n'ahụ na ọzụzụ ahụ ike
Uromaki na eel na-acha uhie uhie
Igwe na-acha ume na mgbe ọ dị ime
Nchịkọta ejiji Chinese
New anti-cellulite mkpisi si GUAM
Kedu otu esi eme ka akwara gị dị n'otu nkeji 1
Ọkụ dị ala n'ime nwata